Dzvanya kune dzimwe nyika dziri pamepu kuti uverenge nhau dzezvitima, mumigwagwa uye mumigwagwa munyika dzeEurope!
Cengiz Kuvaka-Duygu Injiniya Yokubatana yakakunda iyo nyowani yeElin Pelin Vakarel Railway Line, inozivikanwa seyakaomesesa chirongwa muBulgaria. Bulgaria yakafunga chirongwa chakanyanya kuoma chekuvaka kuti chiitwe mumakore ekupedzisira e70 [More ...]
ENKA, pamwe chete nemubatanidzwa wayo mubatsiri Bechtel, yakagadzira uye kuvaka 10 kilomita yeMovava Corridor Motorway Project, iyo ichabatanidza Central Serbia ne11 uye 112 Pan-European Corridors neHurumende yeRepublic of Serbia. [More ...]
Wakareba Njanji Yekurova muBritain Nhoroondo Inotanga
MuUK akatanga zuva rekurova kwe600, iro richabata London pamwe nemaguta akapoterera (SWR), pane njanji kambani South West Railways, yakatakura zviuru zve27 zviuru. SWR neNational Railway, Maritime uye Transport Workers Union (RMT) [More ...]
Cengiz Kuvakwa Inokunda Bulgaria Njanji YeTender
Cengiz Kuvakwa Inokunda Bulgaria Njanji YeTera; Kubva 2006, Cengiz Construction yakaverengerwa mu "ENR Best 250 International Kontrakita" rondedzero, uye yakapera chirongwa cheiyo 11 bhiriyoni 680 mamirioni Dollars. Iripo basa [More ...]
Ekol Logistics uye Italia UBV Boka Kujoinha Mauto
Ekol Logistics, inoenderera mberi nekukura kwayo munhandare yenyika, yakasaina kubvumirana kwenguva refu neItali UBV Boka. Ekol inotarisira kuwedzera mhando yebasa nekuwedzera bazi rayo uye nekuparadzira network. [More ...]
TCDD Yekufambisa Inosangana neMacedonia Railways
Vatungamiri veTCDD Transport uye vakuru veRepublic of Northern Macedonia Railways Transport AS (ZRSM) vakasangana muA Ankara. Musangano wakaitwa kuti uongorore pamwe nekuwedzera hukama huripo hwehukama pakati panjanji mbiri dzenyika. [More ...]
Mushure mekunge mabhazi epamba achangobva kutumirwa kuRomania, makambani eTurkey ave kutanga kutumira ngarava dzechitima kuenda kuRomania. Durmazlar ve Bozankaya Takatambira mahofisi makuru echitima muRomania. Bucharest, Lashi [More ...]
Airbus kushanda neGEFCO
Airbus ichashanda neGEFCO; GEFCO, mutungamiri wepasi rose mune multimodal supply chain mhinduro, akabatana neAirbus, mutungamiri wepasi rose mune aerospace, kutsigira shanduko kuenda kune yakachenesa uye nharaunda inoshamwaridzana nechavanotakura ketheni. [More ...]
Russian Crimea Chitima Kukwira Yakatangwa
Russian Crimea Chitima Kukwira Yakatanga; Nekuvakwa kweCrossan Bridge, nyika huru yeRussia yaive yakabatana nenyika huru yeCrimea, Moscow uye St.Petersburg, inotarisirwa kutanga munguva pfupi, matikiti echitima akananga akaratidzira kufarira kukuru. 25 [More ...]
Nhau yaOlsay Inotaridza Senge Haydarpaşa Chitima Chechitima
Nhau yaOlsay yakafanana neHaydarpaşa Chitima Chiteshi: 1939 chiteshi chakarasikirwa neayo station station uye haina basa nekuti haina kukodzera kune mahurefu marefu. Pa1970, ivo vari kufunga kuputsa chivakwa nekuvaka hotera pachinzvimbo. VaParisi vanoidana [More ...]
Tram kubva Bursa kuenda Bucharest uye Bhazi kuenda Roma
Tram kubva Bursa kuenda Bucharest uye Bhazi kuenda Roma; Organ Bursa Yakarongedzwa Maindasitiri Zone, iyo ine mucheka-yakavakirwa dhizaini, yakadzokera kugadzirwa kunyanya muchikamu chemotokari mumakore anotevera. Nekuti ... Tofaş-Fiat uye Oyak Renault maviri makuru kugadzira mota, iro guta indasitiri chiyero [More ...]